Ukuphuculwa kwe-Verizon Smartplay etyalwe kwi-IBC 2019 -I-NAB bonisa iiNdaba ngoSasazo lweBeat, Usasazo lwaseburhulumenteni lweNAB Show-NAB BONISA uLUPHE
ikhaya » Okufumaneka » Ukuphuculwa kwe-Smartplay yeVerizon eXutywe kwi-IBC 2019
kunye IBC 2019 emva kokuba iphelile, kubalulekile ekujongeni kumaqonga eendaba amangalisayo kunye nawokubonisa ubugcisa athe abonakaliswa kwinkomfa. Inye eyayiphawuleka kakhulu yeyo I-Verizon Media. Kwi-IBC 2019, iindaba zeVerizon zetyala I-Verizon Smartplay, uhlaziyo lwamva nje lweqonga leendaba.
Yintoni iVerizon Smartplay?
I-Verizon Smartplay, eyaziwa ngokuba yiRouting Routing, liqonga leVerizon Media elibonelela ngetrafikhi yevidiyo kuninzi lwee-network zokuhambisa umxholo (ii-CDNs), ezivumela amaxesha okuqalisa akhawulezileyo kunye nokwehlisa umda. I-Verizon Smartplay isebenzisa iseva yeVerizon Media kunye nedatha yokusebenza yabathengi kwinethiwekhi yehlabathi kunye nokusasazwa kwesixhobo ukuhambisa ukugcwala. Oku kunokuba luncedo kakhulu kwiimeko ezibandakanya amanethiwekhi ahlangabezana nokuphuma. Xa ukugcwala kwetrafikhi kubuyiswa ngokuzenzekelayo, abasasazi bayakhuselwa nakweyiphi na ingxaki enokuba yingozi yenethiwekhi.
Indlela i-Verizon Smartplay ehambisa ngayo uMxholo ongcono
Iinzuzo ezininzi zeVerizon Smartplay zibandakanya:
Ukubonakala kokusebenza kwentengiso
Ukwenza ubuntu buqu
Igosa leMveliso eliyiNtloko, iQonga leMidiya eVerizon Media
Ukuxoxa malunga neempawu zeVerizon Smartplay ngakumbi, igosa eliyintloko lemveliso iVerizon Media, Ariff Sidi bendinokutsho, "Senza ukuba abasasazi kunye nabanikezeli bomxholo banikeze ngokuzithemba okukhulu kubabukeli naphi na apho bakhoyo emhlabeni." Oku kuthetha ukuba ungaqiniseka ukuba abaphulaphuli bakho baya kuhlala befumana amava afanelekileyo. ”
I-Verizon Smartplay iphucula ukufakwa kwesikhangiso
Ukongeza ekubuyiseleni phambili ukuhamba kwetrafikhi, iVerizon Smartplay ikwasebenza njengesixhobo esiPhuculiweyo seServer yeAd, inika ukubonakala kokuphela kokuphela kwinkqubo yokufakwa kwentengiso, enokubonisa iimpazamo, ixesha lokuphuma kunye nemicimbi yokulandela umkhondo. Ngakwentengiselwano nganye yentengiso, iseva yokulungisa izinto isebenzela ukuqokelela kunye nokugcina idatha, ebandakanya amaxesha okuphendula kunye nexesha lokuphuma kwiiseva zentengiso yomntu wesithathu, kunye nedatha yenqanaba leseshini ebanzi enokugcinwa ixesha elingaphezulu kweentsuku ezilishumi elinesine.
U-Sidi uye wacacisa ngakumbi ekusebenziseni i-ad server debug xa watsho njalo Abasasazi kunye nabayili bokuqulatha banakho ukuhambisa imijelo ethandwa ngumntu wonke, kodwa, ukuza kuthi ga ngoku, ukwahlulahlula kunye nokuveza imigangatho yecandelo lokuthengisa kwintengiso ye-OTT kwenze ukuba kube nzima ukufumana umbono ocacileyo wento eyenzekayo ngexesha lenkqubo yokufakwa kwentengiso. I-Ad Server Debug iyayitshintsha le nto ngokuthi ibonakale ekuhleni nasekuqondeni indlela iintengiso ezihanjiswa ngayo, zenza ukuba abanikezeli beenkonzo baphucule umgangatho wamava ezigidi zababukeli kwihlabathi liphela.
I-Verizon Smartplay kunye neeVidiyo eziShukumayo
Ukujongwa komxholo we-Verizon Smartplaying kusasaza imithombo yeyona vidiyo yobuqu ethe ngqo esebenzisa ubuchwepheshe bonxibelelwano. Ngenxa yokuba ii-blackouts zifuna abahambisi bomxholo bathintele nayiphi na imixholo esekwe kwindawo yababukeli okanye uhlobo lwesixhobo, abasasazi kufuneka behambise omnye umxholo kunokuba umyalezo osesilinganisweni obeka umngcipheko ekulahlekeni kwababukeli ukuze kugcinwe ukubandakanyeka kwababukeli. Ngaphakathi kwi-UI elula, abathengi bayakwazi ukucwangcisa i-t0 ishedyuli ngaphambi kwexesha kwaye bacwangcise ukuhanjiswa komxholo okwenzelwe umntu ukuba alawule amava ababukeli. Abathengi banokwenza ababukeli, bakhe i-Rulesets, emva koko basebenzise ezi zinto kwi-asethi ebalulekileyo.
Ukwandisa ukuhamba kokusasazwa kwelifa, ukutshintsha umxholo kunye nolawulo lwabaphulaphuli kunokuzenzekela kuko nakuphi na ukuhamba komsebenzi kusetyenziswa isiCwangciso seSiganeko kunye neSaziso soLwazi (i-ESNI). Emva kwenkqubo yokuhlengahlengiswa, umxholo weVerizon Smartplay ekujolise kuyo ujonga indawo yombonisi, isixhobo okanye imeko engqongileyo ukuhambisa amava afanelekileyo ngokukodwa kwimeko yabo.
I-Verizon Smartplay kunye ne-OTT
Xa sithetha ngobuntu be-OTT, uSidi wathi Ukwenza ubuqu kwe-OTT kuxhomekeke kwiseva ebonakalayo ukuze kuveliswe uluhlu lokudlala lomxholo, iintengiso kunye nemiyalelo yokudlala yomsebenzisi ngamnye. Kuya kufuneka ukuba uqiniseke ukuba ungawenza umxholo kwaye uhambelana namalungelo endawo, nokuba bangakanani ababukeleyo, utshilo uSidi. "I-Smartplay ikuvumela ukuba wakhe abaphulaphuli kunye neelemeter ezixhaswayo kuyo yonke impahla, yomntu wonke ojongayo odlala, naphina emhlabeni."
Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi malunga I-Verizon Media kwaye I-Verizon Smartplay, emva koko jonga www.verizonmedia.com.
Ukufakelwa kweAs Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli Cobalt Encoder umxholo UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli umxholo ophezulu OTT Iintetho kunye nemisrya i-subtitling, i-Digital Nirvana, uhlolo lweendaba, IBC zendlela TVU Networks Verizon I-Verizon Media I-Verizon Smart Play Injini yeVidiyo	2019-09-27
Previous: Umsebenzi weKhamera / uMncedisi weMveliso
next: Umbala o "Sneaky Pete" Wenziwe kwiDaVinci Resolve Studio